दाेलखा केन्द्र भएकाे ५.५ को भूकम्पको धक्का ! - Enepalese.com
दाेलखा केन्द्र भएकाे ५.५ को भूकम्पको धक्का !
इनेप्लिज २०७२ जेठ २ गते १२:०३ मा प्रकाशित
काठमाडौं, २ जेठ । दोलखालाई केन्द्रविन्दू बनाएर शनिबार सााझ ५ बजेर १९ मिनेटमा ५ दशमबल ५ रेक्टर स्केलको भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । शनिबार बिहान यता यो पाँचौं पटकको धक्का हो ।
भूकम्पले हल्लाएपछि राजधानीबासीहरु आत्तिँदै सडकमा आएका छन् । मंगलरबारको दोस्रो भूकम्पपछि आफ्नो घरमा सुत्ने र पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको थियो । तर, शनिबार बेलुकाको यो भकम्पले फेरि मानिसलाई त्रसित बनाएको छ ।
भारतकाे पटनामा पनि भूकम्पकाे धक्कापछि मानिसहरू सडकमा निस्किएका छन् ।